Maindasitiri ekugadzira anogara aine chishuwo chakasimba chemhepo yekugadzirisa mhepo sezvo vari ivo vatengi vemasimba masimba munzvimbo dzakasiyana siyana. Iine makore anopfuura gumi eakaonekwa ruzivo mukutengesa / maindasitiri HVAC dhizaini uye kuisirwa, Airwoods inonyatsoziva mune yakaoma mamiriro ekudzora ekuda kwekugadzira uye emafekitori zvivakwa. inoshanda uye inochengetedza magetsi mhinduro yevatengi, ichigadzirisa kuburitsa uye kudzikisira mutengo webhizimusi rekugadzira mukusangana nezvinodiwa zvakanyanya nevatengi vedu.
HVAC Zvinodiwa ZveMafekitori & Workshop
Iyo yekugadzira / yekumaindasitiri chikamu inomiririra akasiyana siyana ekupisa uye kutonhora zvinodiwa, nemafekitori ega uye musangano wega wega uine yavo yakasarudzika seti yezvinodiwa. Mafekitori anoshanda pane 24-awa yekugadzira kutenderera inoda akasarudzika akasimba HVAC system iyo inogona kuchengetedza inogara, yakavimbika kudzora mamiriro ekunze ine yakaderera kudzvanywa. Kugadzirwa kwezvimwe zvigadzirwa kungangoda kudzora kwemamiriro ekunze munzvimbo dzakakura pasina kusiyanisa kwekushisa, kana tembiricha dzakasiyana uye / kana mwando mumatunhu akasiyana epanzvimbo.
Kana chigadzirwa chiri kugadzirwa choburitsa mumhepo makemikari uye zvikamu zvechipfuva, kufefetedza kwakakodzera uye kusefa ndizvo zvinofanirwa kuchengetedza hutano hwevashandi uye zvigadzirwa. Kugadzirwa kwemagetsi kana zvemakomputa zvinogona zvakare kuda mamiriro ekuchenesa.
Yekugadzira mota yemusangano
Magetsi kugadzira musangano
Kugadzira chikafu musangano
Isu tinogadzira nekuvaka mhando yepamusoro, yepamusoro-soro, inoshanduka tsika HVAC mhinduro dzemhando dzakasiyana dzekugadzira nekushandisa kwemaindasitiri, kusanganisira zvinorema kugadzira, chikafu uye maindasitiri echinwiwa, kugadzira kwepamusoro-soro, uye kugadzira kwemishonga kunoda nzvimbo dzakachena.
Isu tinosvika kune yega yega chirongwa seakasarudzika kesi, imwe neimwe iine yayo yakatarwa ematambudziko ekugadzirisa. Isu tinoita ongororo izere yezvinodiwa nevatengi vedu, kusanganisira saizi yezvivakwa, dhizaini nzvimbo, nzvimbo dzinoshanda, zvirevo zvemweya zvemhando yepamusoro uye zvinodiwa pabhajeti. Mainjiniya edu anobva agadzira sisitimu inoenderana nezvinodiwa izvi, kungave kuburikidza nekuvandudza zvinhu mukati mechirongwa chiripo, kana kuvaka uye kuisa ino nyowani sisitimu. Tinogona zvakare kupa smart control system yekutarisa kuti ikubatsire kudzora nharaunda dzakatarwa panguva dzakatarwa, pamwe nemhando dzakasiyana dzebasa uye zvirongwa zvekuchengetedza kuitira kuti system yako irambe ichiita zvakanakira makore anotevera.
Zvekugadzira uye zvivakwa zveindasitiri, kugadzirwa uye kugona zvigetsi zvihombe zvekubudirira, uye yakadzika kana isina kukwana HVAC system inogona kukanganisa zvakanyanya kune ese ari maviri. Ndicho chikonzero Airwoods yakaomarara kuti ipe mhinduro dzakasimba, dzakavimbika uye dzinoshanda kune vatengi vedu vemaindasitiri, uye nei vatengi vedu vauya kuzotivimba kuti tiwane basa chairo kekutanga.
Beijing Zvemotokari Boka AHU
Mooncake Kurongedza Musangano
Kudhinda Fiji Kudyara HVAC Dhizaini
Michina Heat Exchanger ye Samsung Factory